Makedonia : Manamafy Ny Filàna Serasera Malalaka Amin’i Gresy Ireo Mpitoraka Bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Janoary 2018 12:24 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, македонски, 繁體中文, 简体中文, English
Ao anatin'ny korontana anatiny naterak'ireo hetsiky ny Grika hisakanana ny fidiran'i Makedonia ho ao amin'ny OTAN sy ny Vondrona Eoropeana, ary noho ny fitombon'ny isan'ny tatitra momba ny fanafihana ireo Makedoniana mpamily fiarabe ataon'ny hetsika nasionalista any Gresy ( famaliana ôfisialy), dia maro ireo makedoniana mpitoraka bilaogy no miezaka manentsina ny hantsan'ny tsy fahalalàna misy eo amin'ny firenena roa tonta Etsy andaniny, hitan-dry zareo fa ilaina ny mampita ny mombamomba ny Makedoniana amin'ireo Grika, ary etsy ankilany, ny sasany amin-dry zareo nandray ny andraikitra hizara ny vaovao avy amin'ny haino aman-jery grika amin'ireo makedoniana namany.
Mpitoraka bilaogy maro no namaly ilay fanambaràna nataon'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny grika izay nanamarika fa na eo aza ny fisian'ny fiteny sy ny foko Makedoniana dia “tsy manampy” amin'ny famahàna ny olan'ny anarana, amin'ny fiheverana izany ho toy ny politikan'ny fandripahana foko. Resahan'i Zharko Trajanovski, nisintona ampahany tena mahaliana, nitanisa momba ilay katrodohan'ny Departemantam-panjakana Amerikana (MKD).
Làlana mitovy amin'izany, mpitoraka bilaogy am-polony no nampiroborobo ny rakitsarin'ilay hira “Postojam” (” Misy aho”), tamin'ny fampidirana izany tao amin'ny lahatsoratra manokany sy nandefa ny dikany tao amin'ny YouTube. Mampiseho sehatra avy amin'ny horonantsary fanadihadiana momba ny fandripahana foko makedoniana nandritra ny ady an-trano grika tamin'ny 1946-1949, nampiarahana tamin'ny tonony mijery kokoa ny maha-olona :” Misy aho… Voavela heloka ny rehetra : na dia ilay fanirianao mba tsy hisiako intsony aza .”
Nanoratra (MKD) ny mpanoratra ny bilaogy Agnes:
Hatramin'ny nivoahany tamin'ny fomba ôfisialy, dia nahazo fandrakofana be tamin'ny haino aman-jery ilay rakikira tokana “Postojam” nohirain'ilay mpihira pop rock Miyatta, no sady lasa lohahevitry ny fifanakalozan-kevitra teo amin'ny vahoaka makedoniana rehetra manerantany. Naseho ihany koa ny tombony amin'ny fandikàna ilay tononkira ho amin'ny teny anglisy sy ny fanaparitahana izany tany ivelany. Tsy miankina amin'ny votoatin'ilay hira, fa lasa zavatra mendrika fanehoankevitra ilay lahatsary. Ireo izay nahafantatra tsara io ampahan-tantaran'i Makedonia io dia niarahaba an'i Miyatta noho ny namoahany ity fanehoankevitra amin'ny haino aman-jery ity. Ho an'ireo izay sambany vao nijery ity sary ity dia nihevitra fa raha marina izany dia tena mampahonena. Heverin'ny sasany fa andrana ho fisintonana saina fotsiny izany. Mbola ho renesina ireo karazana fanehoankevitra tsara (manohana) sy ratsy (manakiana) rehetra. Faly aho fa vitsy ny isan'ny olona tsy miraharaha loatra ny “Postojam”.
Ny sarin'ireo fijaliana sy sesitany etsy ankilany, ary ireo sarin'ny firaisankina sy ny fireharehana etsy andaniny, no tena maneho marina kokoa an'i Makedonia.
Tsy tokony fohazina ny lasa, fa ilaozana.
‘Ndao hilaozantsika izany, nefa alohan'izay,
‘Ndeha ho fantarintsika izany !
Misy i Makedonia.
Làlana iray hafa, dia namoaka dikanteny avy amin'ny gazety grika, ahitàna sariitatra [MKD] ny bilaogy Drugarche. Noderain'ireo mpitoraka bilaogy maro ny tafatafa nataon'ilay tale makedoniana Milcho Manchevski [GRE], niarahany tamin'ny gazety grika Eleftherotypia, ary nozarain-dry zareo ny rohy mankany amin'ny dikan'izany amin'ny teny anglisy. Nanome fanazavàna ara-tantara kokoa avy amina boky tranainy [ MKD], sy tahirina gazety Tandrefana [MKD] ary koa ny momba ny mety ho fiandohan'ny sainam-pirenena Grika ny sasany.
Fa ny tena zava-dehibe, dia voaporofo fa mpitatitra fototra tamin'ny fizaràna vaovao momba ny fananganana fandriampahalemana tany anivon'ny vahoaka ny bilaogy. tao amin'ilay bilaogy matanjaka Vuna ireo vaovao momba ny fitsidihana ho tanterahan'ireo grika 50 mpiaro ny fandriampahalemana avy any Skopje, renivohitr'i Makedonia hotanterahina ny 17 May 2008 no niseho [MKD] voalohany :
Tsy ezaka andrehetana ny afon'ny fihetsehampo fitiavan-tanindrazana makedoniana ity. Tsy antso hitorahana vato ireo masoivoho, toerampivarotana goavana na zavatra hafa ity.
Ny mifanohitra amin'izany, antso ho fandraisana anjara amin'ny hetsika iray natao hanoherana ny hadalàna rehetra. Ambonin'ny zavatra rehetra dia olona ireo olom-pirenena grika, ary ny maro amin'izy ireo dia tsy misy ifandraisany amin'ny politikam-panjakany manoha-riana sy mpanaradia ny fasista , na amin'ny andian'adala izay misotasota olona an-dàlambe. Mandritra izay, tsy ny makedoniana rehetra no marary saina “mankahala ny zavatra grika rehetra” sy tsy mahandry ny tsy hanipy vato amin'ny biraon'ny Fifandraisana.
Fandriampahalemana, fitiavana, firaisam-po !